China kusimudza bhakiti nharembozha chiteshi fekitari uye bhizimisi Shantui
Nharembozha kongiri batching chirimwa
Kusimudza bhaketi nharembozha
nheyo yemahara kongiri ba ...
Belt mhando kongiri batching ...
Inokodzera gungano uye disassembly, yakakwira kufamba kweshanduko, inokasira uye inokurumidza, uye yakakwana nzvimbo saiti chinja.
1.Convenient gungano nekukatanura, kukwirira kufamba kweshanduko, zviri nyore uye nekukurumidza, uye yakakwana basa saiti chinja.
2.Compact uye inonzwisisika dhizaini, yakakwira modularity dhizaini;
Iko kushanda kuri pachena uye mashandiro acho akatsiga.
4.Less kugara kwebasa, kwakakura kugadzirwa;
5.Iyo magetsi system uye gasi system yakashongedzwa nepamusoro-magumo uye yakakwirira kuvimbika.
Dzidziso yekugadzira m³ / h 25 40 50 75
Chisanganiso Mamiriro JS500 JS750 JS1000 JS1500
Simba rekutyaira （kW） 18.5 30 2X18.5 2X30
Zvaikosha chinzvimbo （L） 500 750 1000 1500
Max.aggregate saizi, Girafu / hurungudo mm ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80
Batching bin Vhoriyamu m³ 4X4 4X4 4X4 4X4
Hoist mota simba （kW） 5.5 7.5 18.5 22
Kuyera huwandu uye kuyera kurongeka Aggregate kg 1500 ± 2% 1500 ± 2% 2000 ± 2% 3000 ± 2%
Simende kg 300 ± 1% 400 ± 1% 500 ± 1% 800 ± 1%
Makirogiramu emvura 150 ± 1% 200 ± 1% 200 ± 1% 300 ± 1%
Yakawedzera kg 20 ± 1% 20 ± 1% 20 ± 1% 30 ± 1%
Kuregedza kukwirira m 3.8 3.8 4.1 4.1
Simba rese m 40 49 74 101
Pashure: nheyo yemahara kongiri batching chirimwa
Zvadaro: Nharembozha kongiri batching chirimwa
Auto Konkrete Batching Kudyara
Otomatiki Central Kongiri Batching Miti
Otomatiki Compact Kongiri Batching Miti
Otomatiki Kongiri Batching Inosanganisa Chidhara Kutengesa
Otomatiki Kongiri Batching Miti
Otomatiki Kongiri Batching Kudyara Fekitori
Otomatiki Kongiri Batching Kudyara Kwekutengesa
Otomatiki Kongiri Batching Dhivha Germany
Simende Kongiri Batching Chirimwa
Cement Kongiri Batching Kudyara Muchina
Cement Kongiri Batching Yekudyara Mutengo
Cement Kongiri Batching Kudyara Rondedzero
Kongiri Batching Chirimwa
Kongiri Batching Kudyara Mutengo
Zvimiro 1.Convenient gungano uye disassembly, yakakwira kufamba kweshanduko, iri nyore uye inokurumidza, uye yakakwana basa saiti chinja. 2.Compact uye inonzwisisika dhizaini, yakakwira modularity dhizaini; Iko kushanda kuri pachena uye mashandiro acho akatsiga. 4.Less kugara kwebasa, kwakakura kugadzirwa; 5.Iyo magetsi system uye gasi system yakashongedzwa nepamusoro-magumo uye yakakwirira kuvimbika. Iyo nharembozha kongiri yekudyara chirimwa ikongiri yekugadzira inoshongedza ...
Belt mhando kongiri batching chirimwa
Zvimiro Chigadzirwa chinoumbwa ne batching system, kuyera system, kusanganisa system, yemagetsi control system, pneumatic control system uye nezvimwe zviyero, hupfu, mvura yekuwedzera uye mvura inogona kungoerekana yakwidzwa uye yakasanganiswa nemuti. Aggregates akaiswa kune akaunganidzwa bin nemutariri wepamberi. Upfu hunoburitswa kubva paShiro kuita huremu hwechiyero ne Screw conveyor .Mvura uye mvura yekuwedzera inowedzerwa pachikero. Ese masisitimu ekuyera ari ...
nheyo yemahara kongiri batching chirimwa
Zvimiro 1. Nheyo yemahara dhizaini, iyo michina inogona kuiswa yekugadzira mushure mekunge nzvimbo saiti yaiswa uye yaomeswa. Kwete kwete chete kudzikisa hwaro hwekuvaka, asiwo kupfupisa iyo yekumisikidza kutenderera. 2.Iyo modular dhizaini yechigadzirwa inoita kuti ive nyore uye nekukurumidza kubvarura nekutakura. 3.Compact compact mamiriro, pasi pebasa. Tsananguro Mode SjHZN0 ...
Skip chitakuriso kongiri batching chirimwa
Zvimiro Chigadzirwa chinoumbwa ne batching system, kuyera system, kusanganisa system, yemagetsi control system, pneumatic control system uye nezvimwe. Zvitatu zviyero, imwe yeupfu, imwe yemvura yekuwedzera uye mvura inogona kungoerekana yaiswa uye yakasanganiswa nemuti. Aggregates akaiswa kune akaunganidzwa bin nemutariri wepamberi. Upfu hunoburitswa kubva paShiro kuita huremu hwechiyero ne Screw conveyor .Mvura uye mvura yekuwedzera inowedzerwa pachikero. Yese weighi ...
Mvura chikuva kongiri batching chirimwa
Zvimiro 1.Iyo yakakodzera kugadzirwa kwekuvakwa kwemvura, uye iyo yakasarudzika mamiriro inosangana nezvinodiwa zvemvura enviroment. 2.Compact chimiro chinogona kudzikisa mutengo wekuvaka wepuratifomu. 3.Iye michina ine yakanyanya kuchengetedzeka uye inokwanisa kuchinjira kuchikuva hwaro kugadzirisa uye pesvedzero yedutu. 4.Equipped pamwe guru vhoriyamu uwandu zvidhina, mumwe-nguva kudyisa anogona kusangana kugadzirwa 500m3 nekongiri (zvinogona customized ...
Yekumhanyisa-kumhanya njanji yakatsaurwa kongiri batching ...
Zvimiro 1.Modular dhizaini, inokodzera kuungana nekukatanura, kukurumidza kuchinjisa, inoshanduka marongero; 2.Kutora yakakwira-inoshanda musanganisi, yakakwira kugadzirwa kushanda, inotsigira akawanda marudzi fo kudyisa tekinoroji, inokodzera dzakasiyana kongiri yekusanganisa zvido, mabhodhi ekumisikidza uye mashizha anotora chiwanikwa kusakara-kusagadzikana zvinhu, nehupenyu hwakareba hupenyu. 3.Iye aggregate kuyera system inowana yakakwira-chaiyo kuyera kwehuwandu pamwe nekukwiridzira iyo d ...